Marvel's 'Blade' dia mahita ny talen'ity, May Feature Wesley Snipe - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Marvel's 'Blade' dia mahita ny talen'ity, May Feature Wesley Snipe
Marvel's 'Blade' dia mahita ny talen'ity, May Feature Wesley Snipe
by Trey Hilburn III Jolay 19, 2021 982 hevitra
Handeha ho any amin'ny hetsika maro an'isa sy fikorontanana marobe isika atsy ho atsy. Ity dia hitarika any amin'ireo maherifo mahery avy amin'ny sampana hafa an'ny Marvel hiditra ary hifanindry amin'ny Marvel Cinematic Universe ankehitriny. Hitondra teo aloha izany Spider-Man mpilalao ho an'i Tom Holland Spider-Man sy ny toy izany. Fantatsika izao fa i Wesley Snipes dia mety hiverina hamonjy ny botony Daywalker amin'ny vaovao ihany koa lelan starring Mahershala Ali. Mazava ho azy fa manaitra ny tsaho mihetsiketsika efa ela izay nitranga hatramin'ny nanambarana ny famerenana ny Blade. Oh, ary lelan nahita ny taleny koa.
Bassam Tariq dia handray ny toeran'ny talen'ny hetsika fihazana vampira vaovao. Tariq no nitantana Mogul Mowgli farany teo. Izy dia talen'ny fahitana, fa ny tale izay hafahafa tsy manana karazana resume izay antenainao avy amin'ny sakaiza saika handray hetsika lehibe sy vampira lehibe.
Wesley Snipes anarana dia nipoitra indray tamin'ny famoahana tsaho mba hiverenana lelan manaraka Mahershala Ali. Ity dia famoahana tsaho mitohy izay miasa mafy. Niverina niverimberina kelikely io. Saingy, amin'ny alalàn'ny multiverse ny ampahany betsaka amin'ny tontolon'ny zava-mitranga ao amin'ny dingana Marvel ho avy. Wesley Snipe hiverina amin'ny ho avy lelan toa azo atao kokoa ny sarimihetsika rehefa manakaiky kokoa isika.
Ka eo no ananantsika. Tale ho an'ny lelan starring Mahershala Ali. Ary azo atao, ento miaraka amina sira, mety hiverina any Daywalkin 'sy slayin' i Wesley Snipe,
Ahoana ny hevitrareo lehilahy momba ny safidin'ny tale? Ary koa, ahoana ny hevitrao momba ny mety hiverenan'ny Snipe? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.